Mombamomba | Torolalana
Inona tokoa moa izany ?
Torolalana dia tranokala ofisialy ho apetraka mba hanampy anao amin’ny fikarakarana antota-taratasy ilaina eo amin’ny sehatra ara-panjakana, ao anatin’izany ny fahazoan-dalana isankarazany: mitondra fiara, manorina trano, manangana orinasa sy ny maro hafa. Ao ihany koa ireo dingana arahina eo amin’ny fiainanao tahaka ny fanohizana fianarana eny amin’ny anjerimanotolo, fikarakarana fisotroan-dronono, sy ny maro hafa.
Ny tolorolalana.gov.mg ihany koa dia manome anao olom-pirenena ireo tsara ho fantatra mahakasika ny raharaham-panjakana toy ny tatitry ny filankevitry ny minisitra, lalàna vaovao sy ny maro hafa.
Manome torohevitra marina sy mazava
Satria dia voamarin’ireo ministera mpiandraikitra ny antotan-taratasy karakaraina izay ho soratana ato. Tsy misy ahiahy izany ianao amin’ny fahamarinan’izay voasoratra ato.
Mitsitsy fotoana sy vola
Eo amin’ny fivezivezena manontany ny tokony atao na mivantana izany na amin’ny antso antaroby izay misy ihany fa mety ho ela ny valiny azo.
Misoroka ny fanambakana sy ny kolikoly
Tsy hisy olona afaka hamitaka anao intsony amin’ny dingana rehetra arahina sy antontan-taratasy ilaina mba ahazoanao izay ilainao.
Mba ahafahana manatsara hatrany ny tolotra sy ny mba ahazoan’ny daholobe fahafam-po amin’ny fampiasana ity sehatra ity dia manasa anao mba hamaly ny fanadihadiana tsotra izay nomanina. Marihana fa tsy antery ary malalaka ny famaliana ny fanadihadiana. Ny valin-teny izay omenao dia mijaona ho rakikevitra entina hanatsarana sy hanamora ny fampiasanao ny tolorolalana.gov.mg.
Ampio izahay hanatsara ny Torolalana.